Ngwongwo maka ire ere na Canyon Lake, Texas
Real Estate Listings: » All Others Real Estate » All Others Real Estate » US » Texas » Ngwongwo maka ire ere na Canyon Lake, Texas1
1 - 1 nke 21
Bipụtara 1 week ago
Koodu nzipu ozi: 78133
Ebube ohuru mara mma nke di na okpukpu abuo, nke di na ọdọ mmiri Canyon! Short drive ka ọdọ na dị iche iche ụgbọ mmiri ramp na a adịghị anya na ogbe ndịda Canyon Lake. Ihe ndina 3/2 a 1, 226 sq.Ft. ft. Ụlọ na-anọdụ ala otu ụzọ n'ụzọ anọ. Igwe nju oyi tinyere ire ụlọ. Ere ego dị.
Kpọtụrụ onye na-akpọsa ngwa ahịa 210490xxxx
Họrọ udiResidential homes Houses Apartments Flats Rooms Condos Townhouses Units Villas Homes Foreclosed HomesLand lots Residential Land Agricultural Land Industrial LandGarages and parking places Parking garagesCommercial Real Estate Office spaces Business Premises Buildings of free appointmentAll Others Real Estate All Others Real EstateBusiness Directory Financial Service Providers Moving Companies Home Improvement Contractors Home Inspection Services Construction Companies Cleaning Contractors Design Services Furniture Companies Photography ServicesReal Estate Agent Directory Real Estate Agents Real Estate Brokers Property Managers
Texas (, n'ime obodo; Spanish: Texas ma ọ bụ Tejas, akpọkwa ˈtexas] (na-ege ntị) bụ steeti dị na South Central Region nke United States. Ọ bụ obodo nke abụọ kachasị na US site na mpaghara (mgbe Alaska gasịrị) na ndị bi (mgbe California gasịrị). Texas nwere ala na steeti Louisiana n'akụkụ ọwụwa anyanwụ, Arkansas na ndịda ọwụwa anyanwụ, Oklahoma n'ebe ugwu, New Mexico n'akụkụ ọdịda anyanwụ, yana steeti Mexico nke Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, na Tamaulipas nke dị na ndịda ọdịda anyanwụ, nweekwa mpaghara ala gbara osimiri okirikiri ya na Gulf of Mexico na ndịda ọwụwa anyanwụ. Houston bụ obodo kachasị elu na Texas na obodo nke anọ kachasị na US, ebe San Antonio bụ obodo nke abụọ kachasị na steeti na asaa nke US Dallas – Fort Worth na Great Houston bụ mpaghara nke anọ na nke ise kachasị ọnụ ọgụgụ obodo mepere emepe. na obodo, n’otu n’otu. Isi obodo ndị ọzọ gụnyere Austin, isi obodo nke abụọ kachasị na US na El Paso. A na-akpọ Texas aha "Lone Star State" maka ọkwa mbụ ya dị ka mba nwere onwe ya, yana ihe ncheta maka mgba nke steeti maka nnwere onwe pụọ na Mexico. Enwere ike ịchọta "Lone Star" na ọkọlọtọ steeti Texas na akara ngosi steeti Texas. Aha nke Texas sitere n'okwu taysha, nke pụtara "ndị enyi" n'asụsụ Caddo.Due nha ya na njirimara ọdịdị ala dịka Balcones Fault, Texas nwere ala dịgasị iche iche na-ewu ewu na mpaghara US Ndịda na South na ndịda ọdịda anyanwụ. Agbanyeghi na Texas jikọtara ọnụ na ọzara ọdịda anyanwụ nke US, ihe na-erughị pasent iri nke ala Texas dị n'ọzara. Imirikiti ebe ndị mmadụ bi bụ bụ ebe ndị bụbu ugwu, ahịhịa, ọhịa na ụsọ mmiri. Ga njem site n’ebe ọwụwa anyanwụ ruo n’ọdịda anyanwụ, mmadụ nwere ike ilele mbara ala sitere na swanps dị n’akụkụ ụsọ mmiri na oke osisi paini, ruo na ndagwurugwu na ugwu ndagide, na n’ikpeazụ ọzara na ugwu nke Big Bend. Okwu a bụ "ọkọlọtọ isii karịrị Texas", na-ezo aka n'ọtụtụ mba chịrị ókèala ahụ. Spain bụ mba Europe mbụ kwalitere ma chịkwaa mpaghara Texas. France nwere obere ọchịchị dị mkpụmkpụ. Mexico na-achịkwa ókèala ahụ ruo 1836 mgbe Texas kwụsịrị nnwere onwe ya, na-aghọ Republic nweere onwe ya. N’afọ 1845, Texas batara n’otu dị ka obodo nke iri abụọ na asatọ. Nchịkọta steeti ahụ kwụsịrị ọtụtụ ihe ndị dugara na Mexico-American War na 1846. statelọ ohu tupu agha obodo America, Texas kwupụtara mbata ya site na US na mbido 1861, wee sonye na Confederate States of America na Machị 2 nke otu afọ. Mgbe agha obodo ahụ na mweghachi nke nnọchite anya ya na gọọmentị etiti, Texas banyere ogologo oge ọnọdụ akụ na ụba malitere. Kemgbe Worldwa IIwa nke Abụọ mere nnukwu ụlọ ọrụ anọ mepụtara akụ na ụba Texas: ehi na anụ ezi, akwa, osisi na mmanụ. Tupu na mgbe agha US gasịrị, ụlọ ọrụ anụ ụlọ, nke Texas bịara na-achị, bụ nnukwu ọkwọ ụgbọ ala maka akụ na ụba, wee si otú a mepụta onyonyo ọdịnala nke Texas ehi. N'ime narị afọ nke iri na iteghete, owu na osisi toro ka ọ bụrụ ọrụ bụ isi ka ụlọ ọrụ ehi si belata obere ego. Ọ bụ njedebe, ọ bụrụ na nchọpụta nke nkwụnye ego mmanụ (Spindletop ọkachasị) bụ onye kpatara nkwalite akụ na ụba nke ghọrọ ihe na-akpali akụ na ụba maka ọtụtụ narị afọ nke 20. Site na itinye ego siri ike na mahadum, Texas mepụtara usoro akụ na ụba na ụlọ ọrụ dị elu na etiti narị afọ nke 20. Dịka nke 2015, ọ bụ nke abụọ na ndepụta nke ụlọ ọrụ Fortune 500 kachasị mma nwere 54. Site na ntọala na-eto eto, steeti na-eduga n'ọtụtụ ọrụ, gụnyere njem, ọrụ ugbo, mmanụ ala, ike, kọmputa na ngwa elektrọn, ikuku, na biomedical. sayensị. Texas emeela US na mbata ego mbupụ na steeti kemgbe 2002 ma nwee ngwaahịa ala kachasị elu nke abụọ. Ọ bụrụ na Texas bụ obodo nwe obodo, ọ ga - abụ akụ nke iri kacha elu na ụwa niile.